Fomba mora hanatsarana ny famakiana ny tranokalanao | Martech Zone
Tsy manao izany ny ankamaroan'ny olona vakio ny tranokala amin'ny heviny mahazatra. Ny olona dia mamaky lahatsoratra avy eo ambony ka hatrany ambany ary mahazo lohateny, bala, sary, teny lakile ary andian-teny izay tadiaviny. Raha te hanatsara ny fomba lanin'ny mpamaky ny atiny ianao, dia misy fomba fanatsarana ny fisehonao.
Asio soratra mainty eo ambadika fotsy. Mety miloko ny lokony malefaka hafa, fa ny mifanohitra kosa no lakileny, ary maizina kokoa ny endritsoratra noho ny ao aoriana.
Manandrama lehibe kokoa, endritsoratra tsara endrika. Tiako i 'Lucida Grande' satria misy serifs ao aminy. Misy porofo manamarina fa ny olona dia vakiany amin'ny endrika teny, fa tsy amin'ny taratasy, ary ny serifs dia manatsara ny fahafaha-mahazo bebe kokoa.
Andramo ampitomboina ny haavon'ny tsipikao amin'ny alàlan'ny CSS mba hanomezana efitrano ampy hanarahan'ny mpamaky andalana lahatsoratra tsy hitsambikina na hidina tsipika tsy nahy.
Ampifanaraho amin'ny lojika ny faritra fotsy misy anao. Ny habaka isaky ny sidebar dia tokony hitovy amin'ny atiny. Ny elanelana misy eo anelanelan'ny lahatsoratra dia tokony ho mihoatra ny elanelana misy ny lohateny sy ny paositra misy azy. Ny endritsoratra ho an'ny atiny dia tokony ho lehibe kokoa noho ny endritsoratra amin'ny endri-javatra isan-karazany ao amin'ny bilaoginao. Ny whitespace no lakile amin'ny tranokala tsara misy famakiana mora.
Ampiasao ny lohateny, sahy, nampiana ary lisitra misy bala Ny lahatsoratra misy soratra sahisahy loatra loatra dia manala ny zavatra niainany ary mampihena ny maha-zava-dehibe ireo andian-teny sahisahy. Omeo fitaovana ho an'ny mpampiasa ny mpampiasa mba hanatsara ny zavatra vakiny. Ny lisitra misy bala dia manome atiny mora vakiana. Ny lisitra toa an'io dia manome lisitra fisainana ho an'ny mpamaky.
Ny lakilen'ny fihazonana tsara sy ny fitomboan'ny mpamaky dia ny fahafahan'ny mpamakinao hitazona ny atiny hitany tao amin'ny tranokalanao. Ny laminao, ny fampiasanao ny toerana fotsy, ary ny fampiasanao tsara ny fitaovanao manoratra dia singa lehibe tsy tokony hodian-tsy jerena.
Tags: mora vakianavakianatoerana fotsy